दाङमा खेलकुदको फड्को – Ganatantra Online
फाल्गुण १० , २०७६ - शनिबार
दाङमा खेलकुदको फड्को
बुधबार, फाल्गुण ०१, २०७५ १४४३३३
दाङ, फागुन १। तीन दशक अगाडी क्रिकेटको लागि मरुभुमि थियो दाङ । क्रिकेटको नामसम्म नसुनेका मान्छेहरु थिए । त्यहि भूमिमा क्रिकेटको सम्भावना खोज्दै संघर्ष गर्नेहरुमा कैलास रोका मगर पनि एक हुनुहुन्छ । अहिले तमाम बाधा अड्चनको बाबजुत क्रिकेटले धेरै प्रगती गरेको छ ।
भारतको देहरादुनमा जन्मिएका रोका ९ वर्षको उमेरमा २०३७ सालमा दाङ भित्रिनु भएको थियो । ‘मैले भारतबाटै ल्याएको व्याड र क्रिकेट खेल्ने नियम देखेर यहाँका मानिसहरु अचम्म पर्थे ।’ रोकाले भन्नुभयो । त्यसको ६ वर्षमै अञ्जुम सिद्धिकीको कप्तानीमा २०४३ सालमा दाङले पहिलो पटक राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनायो । दाङको लागि त्यो ऐतिहासिक प्रतियोगिता थियो ।
प्रदिप योगीको नेतृत्वमा २०५४ सालमा दाङ जिल्ला क्रिकेट संघ स्थापना भएर संस्थागत विकासको सुरुवात भयो । अहिलेसम्म दाङका ७ जना खेलाडीले अन्तरराष्ट्रिय खेल समेत खेलेका छन्, भने राष्ट्रिय खेलाडीको रुपमा २५ देखि ३० जना छन् । क्रिकेट संघ दाङका अध्यक्ष प्रदिप मजगैँयाका अनुसार नियमित एक सय भन्दा बढि महिला क्रिकेट खेल्दै आएका छन् भने पुरुष खेलाडीहरु एक हजार भन्दा बढिको संख्यामा छन् ।
दाङमा क्रिकेट भन्दा पुरानो ईतिहास छ फुटवलको । २०२७ सालमा घोराहीको पद्मोदय पब्लीक नमुना माविका नारायण सिंह गुरुङ शिक्षक भएर आएपछि घोराही क्षेत्रमा फुटवल सुरु भयो । त्यो भन्दा अगाडीको पुस्ताले पनि अनौपचारिक रुपमा फुटवल खेल्ने गरेको गुरुङको भनाई छ । दाङ जिल्ला फुटवल संघका महासचिव नरेन्द्र पुनका अनुसार अहिले दाङमा सातौँ पुस्ता खेलिरहेको छ । तुलसीपुर, हापुर सहितका केहि स्थानमा महिला फुटवल समूहले जिल्लामा उत्कृष्ठ खेल्दै आएको पुनले बताउनुभयो ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्दै गर्दा भलिवल, टेवलटेनिस, ब्याडमिन्टन लगाएतका खेलहरु खेल्ने र अरुलाई पनि खेलाउने गरेको गुरुङले बताउनुभयो । दाङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अनुसार अहिले २५ वटा भन्दा खेलहरु नियमित प्रशिक्षण भैरहेका छन् । समितिको तथ्यांकमा फुटबल, क्रिकेट र भलिवल पछि मार्सल आर्ट, कराँते, तेक्वान्दो, बक्सिङ, टेवुलटेनिस, ब्याडमिन्टन खेलहरु नियमित प्रशिक्षण हुँदै आएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर डाँगीले बताउनुभयो ।
भौतिक पुर्वाधारको प्रगती
केहि वर्षदेखि दाङमा विभिन्न खेलकुदका पुर्वाधार निर्माण हुन थालेका छन् । पालिकास्तर देखि केन्द्रिय तहबाट समेत दाङको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि मैदानहरु निर्माण हुने चरणमा छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगर पालिकाले अरनिको मैदानलाई मिनी स्टेडियम बनाई त्यसलाई तालिम केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने योजना अनुसार काम गर्दैछ भने वडा नं. १२ मा २५ लाखको लागतमा फुटबल अभ्यास केन्द्र निमार्ण भएको छ । तुलसीपुर मै २ करोड ५० लाखको लागतमा बहुउद्देश्य कवर्ड हल पनि बन्दै छ, भने घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ मा ५० लाखको लागतमा आधुनिक बास्केट बल कोर्ट निर्माण भएको छ ।
गत साउनमा शिलान्यास भएको बेलझुण्डी रंगशाला निर्माणको काम जारी छ । २४ करोड २४ लाख ४५ हजार २ सय ९३ रुपैयाको लागतमा निर्माण हुने रंगशाला १० हजार जना मानिसहरु अटाउन सक्ने क्षमताको हुने छ ।
तुलसीपुर उपमहानगर पालिकाले नेपालमै पहिलो स्पोर्ट्स सिटिको रुपमा आफुलाई घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले पछिल्लो समय दाङको तुलसीपुर सहित पोखरा र ईटहरीलाई समेत स्पोट्र्स सिटिको रुपमा विकास गर्ने गरी तयारी गरेको बताउनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)को मापदण्ड अनुसार बन्दै गरेको लमहीको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य तिव्र रुपमा अगाडी बढेको लमही नगर विकास समितिका सबइञ्जिनीयर तुलसीराम अर्यालले बताउनुभयो । लमही नगर विकास समितिको १ करोड ३१ लाख रुपैयाको लागतमा आर्थिक वर्ष २०५७÷०५८ बाट सुरु गरेको मैदानको पुर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न हुन २३ करोड रुपैया लाग्ने अर्यालले बताउनुभयो । २२ हजार दर्शकले एकै साथ खेल हेर्न सक्ने मैदानको निर्माणका लागि अहिले सम्म करीब रू. २ करोड लगानी भइसकेको छ ।
घोराही उपमहानगर पालिका–१७, गुलरियामा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान निर्माणकै चरणमा छ । १५ बिगाहाको क्षेत्रफलमा गत वर्षदेखि प्रदेशस्तरीय रङ्शाला निर्माण कार्य थालेको उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष रङ्गशाला निर्माण योजना बनाएको मेयर नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो । मैदानलाई फराकिलो बनाउनका लागि यो वर्ष ७ कट्ठा २ धुर जग्गा खरीद गरिएको छ ।
यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ स्थित नवलपुर युवा क्लवले अम्वापुर जग्गा विकास आयोजना अन्तर्गत छुट्याइएको जग्गामा फूटवल मैदान निर्माण गरेको छ । जग्गा विकास आयोजना अन्तर्गत नगर विकास समितिले छुट्याइएको करीव साढे २ विगाह क्षेत्रफल मध्ये केही जग्गामा एक समय मिटर लम्वाइ र ६६ मिटर चौडाइ भएको फुटवल मैदान निर्माण गरिएको नवलपुर युवा क्लनका अध्यक्ष दिपक पुनले बताउनुभयो ।
जिल्लामा ठुलो लगानी लगाएर खेलकुद मैदानहरु निर्माण हुने क्रममा रहेको दाङ जिल्ला फुटवल संघका महासचिव नरेन्द्र पुनले जानकारी दिनुभयो । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको साथै लमही नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा एउटा सुविधा सम्पन्न खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने योजना समेत बनाएका छन् ।
दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेको दाङमा स्थानिय सरकारले खेलकुदको क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट सन्तोजनक रहेको पाईएको छ । वडा देखि देखि गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगर र उपमहानगरमा मेयरकप प्रतियोगिता सञ्चालन, भौतिक पुर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।
चालु आर्थिक २०७५÷०७६ मा दाङका १० वटा स्थानीय तहले मात्रै रु १ करोड ५० लाख भन्दा बढि बजेट विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय खेलमैदान निर्माण, स्तरान्नती, खेलकुद भवन निर्माण तथा मर्मत, वडास्तरिय तथा अध्यक्ष र मेयरकप खेलकुद सञ्चालनका लागि प्रत्येक पालिकाले बजेट विनियोजन गरेका छन् । जसमध्य घोराही उपमहानगरपालिकाले रु. १० लाख बजेटको कार्यक्रम निर्माण गरेको छ, भने वडास्तरमा समेत बजेट विनियोजन भएको प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो ।
बबई गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु. ८० लाख ५० हजार बजेटको कार्यक्रम निर्माण गरेको छ । विकट गाउँपालिकाको रुपमा रहेको बबई गाउँपालिकाले हंशपुर खेलमैदानको लागि रु. १० लाख, पञ्चकुले खेलमैदानका लागि रु. १० लाख, वडास्तरको खेलका लागि रु. ७ लाख लगाएतका कार्यक्रम रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर तिवारीले बताउनुभयो ।
यस्तै लमही नगरपालिकाले रु. २० लाख, राप्ती गाउँपालिकाले रु. १० लाख, राजपुर गाउँपालिकाले रु. ५, दंगीशरण गाउँपालिकाले रु. ५ लाख बजेट छु्टयाएका छन्, भने अन्य गाउँपालिकाले १ लाख देखि माथी बजेट विनियोजन गरेको पाईएको छ ।
लाखौँको लगानीमा भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण हुँदै गर्दा अहिले पनि धेरै खेलाडीहरु बगरमा नांगो खुट्टा फुटवल खेल्न बाध्य छन्, भने स्थानीय श्रोतसाधनको प्रयोग गरेर क्रिकेट खेल्नेहरु गाउँमा रहेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष डिल्ली डाँगीले बताउनुभयो । ‘दाङमा फुटवल, क्रिकेट, भलिवल र मार्सल आर्ट बाहेक अन्य खेलको विकास पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन ।’
अध्यक्ष डाँगीले भन्नुभयो, ‘खेल प्रत्येक मानिसको जीवनसँग जोडिने विषय रहेछ, त्यसैले पनि स्रोतसाधनको अभाव सधै हुने रहेछ ।’ खेलाडीहरुको अनुपातमा खेलमैदानको अभाव नै रहेको जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रदिप मजगैँयाले बताउनुभयो । ‘जिल्लामा कोचको व्यवस्था अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन’ अध्यक्ष मजगैँयाले भन्नुभयो, ‘राज्यले खेल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पराकिलो बन्न सकेको छैन, खेलकुद प्रथामिकतामा पर्न सकेन, अहिलेको सबै भन्दा ठुलो चुनौती हो ।’
खेल भनेको मनोरञ्जन मात्र नभई प्राविधिक विषय भएकाले राज्यले तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै आबस्यकता रहेको फुटवल संघका महासचिव नरेन्द्र पुनले बताउनुभयो ।